Kely sy bitika tokoa ny elanelana hita teo anatrehan'ny vokatra navoakan'ny CENI sy ny navoakan'ny HCC. "Vovoka" fotsiny ihany hoy ny fiteny ankehitriny. Raha 39,19 tokoa mantsy ny an'Atoa Rajoelina laharana 13 tamin'ny vokatra navoakan' ny CENI, dia niampy kely fotsiny io androany, 39,23, tamin'ireo izay notononin'ny HCC.
Ny an-dRavalomanana laharana 25 koa dia toa izany ihany, saingy niiba : 35,35 tamin'ny CENI, 35,29 kosa ny an'ny HCC. Ny an'i Rajaonarimampianina laharana faha-12 moa dia niampy isa roa fotsiny, 8,82% lasa 8,84%.
Raha ireo isa marikin'ny kandidà telo voalohany ireo fotsiny no jerena, dia tsy misy mitombina ve izany ireo "requêtes" 212 nakarina teny amin'ny HCC? Ary ilay fanazavana ampahibemaso nataon'ny kandidà laharana faha-13 andro vitsy lasa izay, izay naharesy lahatra olona maro tokoa?
Tsy misy nitombina ve?
Ny Malagasy olon-tsotra moa dia mijery am-"pahendrena" ny zava-misy, ary manamarika mora hoe "ny voay tokoa hono tsy mihinana ny namany". Izany hoe, raha raisina tokoa fa nisy ny kolikoly avo lenta teo anivon'ireo manampahefana ambony momba ny fifidianana ireo, moa tsy samy nahazo ny anjarany va, ka ndeha hifanala-baraka sy hifanebaka imasom-bahoaka?